Dadka Ceelbuur dega oo Xabsi xun la geliyay & arrimo naxdin leh oo ka jira - iftineducation.com
Dadka Ceelbuur dega oo Xabsi xun la geliyay & arrimo naxdin leh oo ka jira
iftineducation.com – Gudoomiyaha Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa sheegay in Al-shabaab dadka ku nool Degmada Ceelbuur iyo Tuulooyinka Hoosyimaada ay Dhibaato ay ku hayaan.
Nuur Xasan Guutaale ayaa sheegay in Al-shabaab ay Dadka Reer Guuraaga ah ee ku nool Degmada iyo Toolooyinka hoostaga ay Al-shabaab u sheegeen in hadii ay qaataan Raashin Gar gaar ah oo Ceelbuur yaala la dili doono cidii qaadata Raashinkaasi.
Sidoo kale Gudoomiyaha Ceelbuur ayaa sheegay in Al-shabaab ay dadka ku Amreen in aysan Magaalada Ceelbuur gali karin islamarkaana aysan u dul qaadan doonin Maamulkiisa Arrintaas.
Al-shabaab ayaa laga saaray Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud Bishii March ee Sanadkaan,waxaana Degmada ilaa xiligaa ka taagan Xaalada adag oo Dhanka Nolosha ah.
Xasan oo qarka usaaran inuu ku dhaco shirqool uusan ka badbaadi doonin
Sawiro: Dalka Australia oo jahwareer ku sugan kadib hal nin oo afduub u…